Microsoft Office 2016 ကို ထာဝရအသက်သွင်းနည်း - VidaBytes | LifeBytes
Microsoft Office 2016 ကိုအစဉ်အမြဲဘယ်လိုအသက်သွင်းမလဲ
ကွန်ရက်များတွင် ကွန်ရက်များ | | ရုံး
၎င်းကိုသက်ဝင်စေသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည် Microsoft က Office ကို 2016 ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကဤမျှလောက်မလွယ်ကူပါဟုယခင်ကပြောခဲ့သည်။ သင်သုံးနိုင်သည် activator ရုံး 2016 နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်လျင်မြန်စွာ သို့သော်၎င်းကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်ကိုမရှင်းပြမီ၎င်းအကြောင်းကို ဦး စွာပြောရန်အရေးကြီးသည် Microsoft က Office ကို 2016 ၎င်းသည်အဘယ်အရာကိုကမ်းလှမ်းသနည်း။
1 Microsoft Office 2016 ဆိုတာဘာလဲ။
2.1 နည်းလမ်းတစ်ခု - အမှတ်စဉ်ရုံး ၂၀၁၆ စံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပေါင်း
2.2 Microsoft Office 2016 အတွက်ကုန်ပစ္စည်းသော့များစာရင်း
2.4 အခမဲ့ MS Office Product Key:
2.5 Microsoft Office 2016 အတွက်ထုတ်ကုန်သော့ချက်
2.6 MS Office 2016 အမှတ်စဉ်
2.7 Office 2016 Product Key အပြည့်အစုံ
2.8 နည်းလမ်းနှစ်ခု - .bat file မှတဆင့် program 2016 မပါဘဲရုံး XNUMX ကိုအသက်သွင်းပါ
2.8.1 Microsoft Office 2016 ကိုအသက်သွင်းရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
2.9 နည်းလမ်းသုံး - KMS Pico မှတဆင့်
2.9.1 office 2016 activator အပြည့်အစုံကို download လုပ်ရန်အဆင့်များ
3 နည်းလမ်းလေးခု - Microsoft Toolkit မှတဆင့် Office 2016 Professional plus နှင့် standard ကို activation
3.1 Microsoft Office 2016 ကို activate လုပ်ဖို့ Microsoft Toolkit ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ
4 Office 2016 ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
5 Microsoft office 2016 စတင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
5.0.1 ဤနည်းလမ်းများ သုံး၍ Microsoft Office ကိုအသက်သွင်းရန်လုံခြုံပါသလား။
Microsoft Office 2016 ဆိုတာဘာလဲ။
Microsoft က Office ကို 2016 ၎င်းသည် Microsoft Office productivity suite ၏ဗားရှင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် Office 2013 နှင့် Mac 2011 အတွက် Office နှစ်ခုလုံးနှင့် Office 2019 နှစ်ခုလုံးကိုအောင်မြင်သည်။
ဒီဗားရှင်း Microsoft က Office ကို 2016 ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်တိုးတက်လာသောအသွင်အပြင်များဖြင့်လုံးဝပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောအမြင်အသွင်အပြင်ဖြင့်ပြသသည်။ ၎င်း၏အသုံးအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအနက် Word, Excel, PowerPoint နှင့် Outlook တို့ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါး၌သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုရလိမ့်မည် Office 2016 32 bits ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်အခမဲ့ download လုပ်ပြီး Office 2016 64 bits ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်အခမဲ့ download လုပ်ပါ။မရ။ သင်၏ကွန်ပျူတာပရိုဆက်ဆာနှင့်လိုက်ဖက်သောအထုပ်ကိုသာ download လုပ်ပါ။
သင်မည်သို့ install လုပ်ရမည်ကိုမသိပါ Microsoft Office ကိုအခမဲ့သုံးပါစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး၊ ဒီသင်ခန်းစာမှာမင်းလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရလိမ့်မယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင်နည်းလမ်းများစွာ၊ နည်းလမ်းများစွာရှိသည် ရုံးကိုအခမဲ့ဖွင့်ပါ ဒါပေမယ့်အားလုံးအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အချို့မှာအလုပ်မလုပ်တော့ဘဲအချို့သည်သီးခြားလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဒါပေမယ့်၊ ဒီနေ့တကယ်အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးခုကိုငါတို့ဒီမှာသင်တင်ပြတယ်။
နည်းလမ်းတစ်ခု - အမှတ်စဉ်ရုံး ၂၀၁၆ စံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပေါင်း
နည်းလမ်းများအနက်မှပထမဆုံးဖြစ်သည် ထုတ်ကုန်သော့ချက် ၎င်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အက္ခရာစဉ် ၂၅ လုံးပါသော set တစ်ခုထက်မပိုပါ။ အချို့ထုတ်ကုန်များအတွက်သော့များ Microsoft က Office ကို 2016 သူတို့မှာများသောအားဖြင့်အက္ခရာပိုများတယ်။ ဤသော့သည်သင်ရရှိသောနည်းလမ်းပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ အောက်ပါအတွက်ထုတ်ကုန်သော့များစာရင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် Microsoft Office 2016 ကိုအသက်သွင်းပါ။
Microsoft Office 2016 အတွက်ကုန်ပစ္စည်းသော့များစာရင်း
အခမဲ့ MS Office Product Key:
Microsoft Office 2016 အတွက်ထုတ်ကုန်သော့ချက်
MS Office 2016 အမှတ်စဉ်
Office 2016 Product Key အပြည့်အစုံ
ဤကီးများဖြင့်၎င်းကိုသက်ဝင်စေရန်သင် ဦး စွာ၎င်းကိုထည့်သွင်းရပါမည်။ သင်မတပ်ဆင်ရသေးပါက၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေနှင့်တပ်ဆင်ပြီးပါက၎င်းသည်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုစတင်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်အကြံပြုသည် စကားလုံးမရ။ ဤနောက်မှ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစတင်သောအခါ၎င်းသည်သင့်အားချက်ချင်းတောင်းလိမ့်မည် ထုတ်ကုန်အမှတ်စဉ် ဤနည်းဖြင့်၎င်းကိုသင်သက်ဝင်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမမေးလျှင်၊ ဤအဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
ကိုနှိပ်ပါ archive ကို နှင့်ကို select အကောင့်.
Product Key ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ Microsoft Office ကိုအသက်သွင်းပါ နှင့်စကားဝှက်ကိုအတည်ပြုပါ။
သတင်းတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ် "Microsoft Office 2016 ရပါပြီ»။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏အထုပ်ကိုရလိမ့်မည် Microsoft Office 2016 ရပါပြီ မင်းကသူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုတွက်ချက်နိုင်လိမ့်မယ်။
ဤနည်းလမ်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ သို့သော်သင်လိုသေးသည် Microsoft Office 2016 ကိုဖွင့်ပါ၊ နောက်နည်းလမ်းတွေကိုဆက်ဖတ်ပါ။
နည်းလမ်းနှစ်ခု - .bat file မှတဆင့် program 2016 မပါဘဲရုံး XNUMX ကိုအသက်သွင်းပါ
ဒီနည်းကနည်းနည်းရိုးရှင်းပေမယ့်အတွက်ထိရောက်မှုရှိပါတယ် ပရိုဂရမ်များမပါဘဲ Microsoft Office ကိုဖွင့်ပါမရ။ ၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ယခင်ကကုဒ်သွင်းထားသော .bat ဖိုင်လ်ကိုစီမံကွပ်ကဲသည် Microsoft Office 2016 ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ.
Microsoft Office 2016 ကိုအသက်သွင်းရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပေါ်လာသောကုဒ်ကို ကူးယူပါ။ (https://www.miblocdenotas.com/279692)
သင်၏ PC desktop ပေါ်တွင် right click နှိပ်၍ notepad document အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ။
ဖိုင်ကို run ပါ activator.cmd ငါ့ကိုလုပ်ခွင့်ပြုပါ Microsoft Office 2016 ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ.
သင်ဤအဆင့်သို့ရောက်ပြီးခြေလှမ်းအားလုံးကိုလိုက်နာလျှင်၊ သင်ရှိသင့်သည် Microsoft Office 2016 ကို activatedမရ။ သို့သော်၎င်းသည်ကိစ္စမဟုတ်လျှင် activation မအောင်မြင်ပါကနောက်နည်းလမ်းများကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။
နည်းလမ်းသုံး - KMS Pico မှတဆင့်
မသန်စွမ်း Microsoft Office 2016 ကိုအသက်သွင်းပါ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ်သက်ပါကသင် tool ကိုသုံးနိုင်သည် KMS အထွတ်အထိပ်မရ။ ဤ tool သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးမည်သည့်ဗားရှင်းတွင်မဆိုရုံးသုံးရန်အလွန်ထိရောက်သည်မရ။ KMS အထွတ်အထိပ် es activator ရုံး 2016 အကြံပြုဆုံး၊ ၎င်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ရုံးခွဲအားဖြိုခွဲရန်အစွမ်းထက်ဆုံး patch တစ်ခုအဖြစ်လည်းသတ်မှတ်သည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် KMSPico ကို download လုပ်ပါ ၎င်းသည်၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာမှ၊ သင်တရားဝင်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းနေကြောင်းသေချာစေနိုင်သည် KMSPico သည် ၂၀၁၆ ရုံးကိုဖာထေးရန်.
office 2016 activator အပြည့်အစုံကို download လုပ်ရန်အဆင့်များ
KMS Activator office 2016 ကို download လုပ်ပါ.
download လုပ်ထားသော .exe ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုပိတ်ပစ်ပါ Microsoft က Office ကို 2016.
ပရိုဂရမ်အားဖွင့်လိုက်သည်နှင့်အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ Microsoft က Office ကို 2016 နှင့်အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်လိမ့်မည်။ ဗားရှင်းကအရေးမကြီးပါဘူး Office ကို 2016 မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်ထည့်သွင်းထားသောအရာကိုအောင်မြင်စွာအသက်သွင်းလိမ့်မည်။ သင်တပ်ဆင်နိုင်သည် Microsoft Office 2016 ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေါင်း 2016 o Microsoft Office 2016 စံ.
ဒီနောက်မှာမင်းရဲ့အထုပ် ရုံး 2016 အပြည့်အဝအသက်သွင်းပြီးဖြစ်လိမ့်မည် Microsoft Office 2016 KMSPico activator ဖြစ်သည် သူ့အလုပ်သူလုပ်လိမ့်မယ်။
၎င်းကိုစစ်ဆေးပါ Microsoft Office 2016 ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ပြီးပြီ။ Office 2016 ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုဖွင့်ပါ၊ ဖိုင်ကိုနှိပ်ပါ၊ အကောင့်ကိုရွေးပါ။
အပိုင်းမှာတော့ ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် message ပေါ်လာသင့်သည် Activated ကုန်ပစ္စည်းမရ။ မဟုတ်ရင်တစ်ခုခုမှားနေပြီ၊ မင်းဒီနည်းကိုထပ်စမ်းကြည့်ဖို့ငါအကြံပေးတယ်။
အကယ်၍ အခြားကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးပါကသင်၏ထုတ်ကုန်ကိုအသက်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ Microsoft က Office ကို 2016အောက်ပါနည်းလမ်းကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
နည်းလမ်းလေးခု - Microsoft Toolkit မှတဆင့် Office 2016 Professional plus နှင့် standard ကို activation
ဤနည်းလမ်းသည်အလွန်ဆင်တူသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် KMS Pico ဒါပေမယ့်အဲဒါကပိုခေတ်မီပြီးပိုရင်းနှီးတဲ့ interface လည်းရှိတယ်။ Microsoft Toolkit မင်းကိုကူညီမယ့်ဒီ tool ရဲ့နာမည်က Microsoft Office 2016 ကိုဖွင့်ပါမရ။ လက်ရှိတွင်၎င်းသည်အမြဲတမ်း ၁၀၀% အောင်မြင်သောတစ်ခုတည်းသောတကယ်ထိရောက်သော tool ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးလုံးဝမပါသောကြောင့်သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
Microsoft Toolkit အဖြစ်လူသိများမတိုင်မီ EZ Activator ၎င်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် main member မှတီထွင်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝမရ။ ဤ tool သည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည် အော့ဖ်လိုင်း modeထို့ကြောင့်သင်၏ Office 2016 ကိုအသက်သွင်းရန်အင်တာနက်မလိုပါ။
ဒီ tool ကိုသုံးဖို့အတွက်သင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ် သင်၏ antivirus ကိုယာယီပိတ်ထားပါမရ။ activator သည်သင်၏ Office 2016 package ၏ code ကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီး၎င်းကို activate လုပ်ပေးသော patch တစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီနောက်မှာမင်းရဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းနိုင်ပြီးမင်းရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ဖို့ဆက်လုပ်နိုင်တယ်။
Microsoft Office 2016 ကို activate လုပ်ဖို့ Microsoft Toolkit ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ
ကုန်ချ Microsoft Toolkit ၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာကနေ။
ဖိုင်ကိုဖြည်ချပါ Microsoft Toolkit.rar သင် download လုပ်ထားသော .rar ဖိုင်အတွက်စကားဝှက်သည် "တရားဝင်-kmspico.com” ။ ဒီနောက်မှာဖိုင်ကို run ပါ Microsoft Toolkit.exe အစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်။
ဖန်သားပြင်တွင် Office နှင့် Windows logo ပါသော toolbox တစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ရှေ့ဆက်ရန်ရုံးလိုဂိုကိုရွေးပါ။
ရွေးချယ်စရာများစွာပါ ၀ င်သော pop-up ၀ င်းဒိုးအသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ tab ကိုနှိပ်ပါ activation ပြီးနောက်ကိုနှိပ်ပါ EZ-Activator ဖြစ်သည်မရ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။
၎င်းနောက်သင်ပြောသောသတင်း ၀ င်းဒိုးတစ်ခုကိုသင်တွေ့နိုင်သည် Office 2016 ကို Activate လုပ်ပါပြီ.
ဤနည်းဖြင့်သင်၏ Office 2016 ပက်ကေ့ခ်ျကိုအပြီးအပိုင်အသက်သွင်းလိမ့်မည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးရန် Office 2016 ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ပါ၊ ကိုနှိပ်ပါ ဖိုင်> အကောင့်> အဲဒီကနေ message ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် Activated ကုန်ပစ္စည်း.
ဒါပဲ၊ ဒီနည်းနဲ့မင်းဘယ်ဗားရှင်းကိုမဆိုအသက်သွင်းနိုင်တယ် Microsoft Office မလိုအောင်မရ။ ဒါ့အပြင်ဒီ tool ကို Windows ဗားရှင်းတွေကိုအသက်သွင်းဖို့သုံးပါတယ်။
Office 2016 ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ
ဤရိုးရှင်းသောဗွီဒီယိုဖြင့်သင် Update လုပ်ထားသော Office 2016 ကိုစဖွင့်ရာတွင်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်သင်ယူလိမ့်မည်။
Microsoft office 2016 စတင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ဤနည်းလမ်းများ သုံး၍ Microsoft Office ကိုအသက်သွင်းရန်လုံခြုံပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုခုကိုသုံးပြီးရုံးကိုဖွင့်တာဟာ ၁၀၀% လုံခြုံပြီးလုံခြုံပါတယ်။ သို့သော်လည်းအောင်မြင်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုသေချာစေရန်သင်ညွှန်ပြသောအဆင့်အားလုံးကိုလိုက်နာရပါမည်။
လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ပြီးခဏနေရင်မင်းလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုသုံးခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုရင် activator ကိုပြန်သုံးဖို့အချိန်တန်ပြီ။ နည်းလမ်းကိုသုံးဖို့ငါအကြံပေးပါတယ် Microsoft Toolkit သင်၏သက်ဝင်မှုကိုထိရောက်မှုအာမခံရန် Microsoft က Office ကို 2016.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » ရုံး » Microsoft Office 2016 ကိုအစဉ်အမြဲဘယ်လိုအသက်သွင်းမလဲ
ဒေတာဘေ့စ်တွင် Client server architecture
middleware ဆိုတာဘာလဲ။ သမိုင်း၊ အသုံးချမှုများနှင့်အခြားအရာများ